Deg Deg:-weerar ka dhacay Afgooye | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Deg Deg:-weerar ka dhacay Afgooye
written by warsan radio 09/02/2022
Kooxo ku hubeysnaa Bustoolado ayaa degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ay xalay ka geysteen weerar geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Kooxaha hubeysnaa ayaa galay Masjidka Raqayle ee degmada Afgooye oo wabiga kaabiga ku haya, iyaga oo rasaas la dhacay qaar kamid ah dadkii kujiray masjidka
Wararka la helay ayaa sheegaya in weerarkaas uu ku dhintay hal Ruux halka laba kale ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo kamid ahaa dadka kunool degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose, iyada oo dadkii ka dambeeyay weerarkaas ay goobta ka baxsadeen.
Ciidamo katirsan Booliska degmada Afgooye ayaa tegay Masaajidka, iyaga oo howlgal ka sameeyay Aaga uu dilka ka dhacay, waxaana weli la ogeyn sababta loo beegsaday dadkaasi, iyada oo horay loo dilay Imaamkii Masaajidka iyo Wiil uu dhalay oo mu’adin ahaa.
Maamulka degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose ayaan weli ka hadlin weerarkaas, waxaana degmada Afgooye ay noqotay goob mar walba dadka la isaga dilo, isla markaana aysan jirin cid wax ka qabaneysa.
Deg Deg:-weerar ka dhacay Afgooye was last modified: February 9th, 2022 by warsan radio
Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka oo Maanta lagu qabanayo Baraawe
Gaari Waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo kusoo jeeday Muqdisho oo la qabtay (Sawirro)
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Wakiilada Beesha Caalamka